FX-Heavy 'Ropa Rakawanda' Madonhwe paShudder Mukushamisika Kusunungurwa
musha Horror Varaidzo Nhau FX-Heavy 'Ropa Rakawanda' Madonhwe paShudder Mukushamisika Kusunungurwa
by Timothy Rawles April 28, 2020 1,018 maonero
Mune izvo mumwe mutsoropodzi anodana "Kufara uye kunakidza segehena," Ropa Quantum wawana kushamisika kudonha paShudder mangwanani ano.
Sechikamu cheyavo "Hafu yeHallow Mwedzi weHalloween" iyo yekushambadzira sevhisi yakafunga kuti ichave iri nguva yakakwana yekutumira ino inogamuchirwa-yakanaka mutambo pamutambo wavo.
"Takaziva kuti firimu raive rakakosha uye rakakodzera nguva patakaiwana gore rapfuura, asi takapihwa zviitiko zvenguva pfupi yadarika Ropa QuantumMadingindira ekuzviparadzanisa nevamwe, kutya kutapukira, uye vanhu vachirwira hutachiona hwepasirese zvakura chete, "akadaro Shudder General Manager Craig Engler. "Pakaburitswa mutambo wemitambo nekuda kwedenda repasirese, takafunga kuti tikurumidze kuvhurwa kwefirimu raBarnaby kuti risvike kuvanhu vakawanda."
Iyi firimu inotevera denda revanhu vakafa vachidzoka kuhupenyu padhuze ne Mi'gmaq inochengeterwa yeRed Crow iyo neimwe nzira isingabatirwe nayo. Traylor (Greyeyes), shefu wedzinza, anofanirwa "kudzivirira musikana wemusikana ane pamuviri, vapoteri vevapoteri, uye kuchengetedza riffraff kubva kumapoka ezvitunha zvichena zvinofamba."
Mutungamiri Jeff Barnaby (Rhymes yeVadiki Ghouls) Mutambi wekutanga wemuFirimu akazvarwa munzvimbo yeMi'gmaq, uko Ropa Quantum zvinoitika. Anoita zvakapetwa basa pano semunyori, director, mupepeti, uye munyori. Mafirimu ake anowanzo kukandwa kubva mukati mevaNharaunda uye anopenda yakajeka uye inotyisa mifananidzo yeashure-yekoloni hupenyu hweVanhu uye tsika - mune ino kesi, kuipenda muropa.
Ropa Quantum yakatanga kuratidzwa paTIFF's Midnight Madness block muna 2019 neongororo dzakanaka. iHorror pachake mutsoropodzi Kelly McNeely kutaura kweye gore mhedzisiro, "Iyi firimu rinoonekera rinoita kuti Tom Savini azvirumbidze, aine nguva dzinopa rukudzo kune chimwe chezviitiko zvine hutsinye mu Dawn of the Dead.